चन्द्रयान २ः के मोदीले क्यामरा देखेर इसरो प्रमुखलाई सान्त्वना दिए ? यस्तो छ वास्तविकता | Ratopati
चन्द्रयान २ः के मोदीले क्यामरा देखेर इसरो प्रमुखलाई सान्त्वना दिए ? यस्तो छ वास्तविकता
SM VIRAL VIDEO GRAB
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र इसरो प्रमुख के. सिवनको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा हालै सेयर गरिएको छ । फोटो सेयर गर्दै दाबी गरिएको छ – ‘सिवनले जब मोदीलाई विक्रम ल्याण्डर हराएको सूचना दिए न त उनले अँगालो हाले न नै सान्त्वना दिए तर क्यामराको अगाडि आएपछि उनीहरु रोइ–कराइ गर्न थालेका हुन् ।’
२७ सेकेन्डको उक्त भिडियो फेसबुक र ह्वाट्सएपका ठूला ग्रुपमा सेयर गरिएका छन् ।
भिडियोको पहिलो हिस्सामा मोदीले सूचना पाएपछि सिवनलाई केही भनेर आफ्नो ठाउँमा गएर बसेको देखिन्छन् । जबकी दोस्रो भागमा उनी सिवनलाई आफ्नो छातीमा टाँसेर उनको पिठ्युँ थप्थपाइरहेको देख्न सकिन्छ ।
सोसल मिडियामा जसले उक्त भाइरल भिडियो सेयर गरे उनीहरुले लेखेका छन्, ‘मिडिया र क्यामरा वरिपरि नभएकाले मोदीले सुरुमा सिवनलाई फिर्ता पठाएका थिए तर कपडा फेरेपछि र क्यामराको उपस्थितीमा उनले सिवनलाई अँगालो हालेर सान्त्वना दिए ।’
तर बीबीसीले आफ्नो अनुसन्धानमा उक्त दाबी भ्रामक भएको र भाइरल भिडियोलाई दुरदर्शन न्यूजको प्रत्यक्ष प्रशारणका दुई फरक दृश्यलाई जोडेर बनाएको पत्ता लगाएको छ ।
दुरदर्शन न्यूजको पूरा लाइभ प्रशारण देखेपछि थाहा हुन्छ कि मोदीले दुबै भेटमा इसरो प्रमखु र उनको समूहका वैज्ञानिकलाई हिम्मत दिएका थिए ।
हिलो हिस्सा र वास्तविकताः
भाइरल भिडियोको पहिलो हिस्सामा देखिए अनुसार मोदीले विक्रम ल्याण्डरको सूचना पाएपछि सिवनलाई केही भन्छन् र गएर आफ्नो स्थानमा बस्छन् । यो ६ र ७ सेप्टेम्बर सन् २०१९ को राती करिब साढे एक बजेको घटना हो ।
जबकी १ बजेर ४५ मिनेटमा इसरो प्रमुख के. सिवनले बेंगलुरुको इसरो सेन्टरबाट विक्रम ल्याण्डरसँग सम्पर्क टुटेको पहिलो औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
सिवनले औपचारिक घोषणा अघि निर्धारित प्रोटोकल अनुसार मोदीलाई यसको सूचना दिएका थिए ।
जतिबेला सिवनले मोदीलाई विक्रम ल्याण्डरसँग इसरो सेन्टरको सम्पर्क टुटेको बताए त्यतिबेला दुरदर्शन न्यूजका क्यामरापर्सनले उनलाई घेरेका थिए र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो ।
भारतको सरकारी न्यूज च्यानल दुरदर्शनले राती साढे १२ बजे इसरो सेन्टरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेका थिए । डिडी न्यूजको फुटेज अनुसार प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएको २३ मिनेटपछि मोदी ‘मिसन अपरेशन कम्प्लेक्स’ प्रवेश गरेका थिए ।
विक्रम ल्याण्डर चन्द्रमाको सतहमा उत्रने कार्यक्रम ५१ औं मिनेट (राती करिब सवा एक बजे) सम्म आफ्नो निर्धारित तालिकामा चलिरहेको थियो । तर हेर्दा हेर्दै इसरो सेन्टरमा सन्नाटा छायो ।
५३ औं मिनेटमा चन्द्रयान–२ मिशनकी निर्देशक रितु करिदालको आवाज इसरो सेन्टरको ठूलो स्पिकरमा सुनियो जसले विक्रम ल्याण्डरबाट केही प्रतिक्रिया पाउन नसकेको बताइरहेकी थिइन् । केही मिनेटपछि इसरो प्रमुखले यसको औपचारक घोषणा गरे ।
त्यसपछि मोदी पहिलो तल्लामा रहेको आफ्नो कक्षबाट कन्ट्रोल सेन्टरमा आए र उनले इसरो प्रमुखसमेत सबै वैज्ञानिकलाई सम्बोधन गरे ।
इसरो चीफ के सिवनको काँधमा थप्थपाउँदै उनले भने, ‘हौसला बढाइराख्नुहोस् ।’
मोदीले थपे, ‘जीवनमा उतार चढाव आइरहन्छन् । आज जुन तपाईंहरुले गर्नुभएको छ, त्यो सानो काम होइन । मेरो तर्फबाट तपाईंहरुलाई बधाई छ । तपाईंहरुले आफ्नो देश, विज्ञान र मानव जातीको उत्कृष्ट सेवा गर्नुभएको छ । यसबाट पनि हामीले केही सिकिरहेका छौं । हाम्रो यात्रा यसपछि पनि जारी रहनेछ । म पूर्ण रुपमा तपाईंहरुको साथमा छु । हिम्मतका साथ अघि बढ्नुहोस् ।’
त्यसपछि उनले स्कूलका छात्राहरुलाई भेटे र त्यसपछि इसरो सेन्टरबाट निस्किए ।
भाइरल भिडियोको दोस्रो भागः
सेप्टेम्बर ७ २०१९ को बिहान ७ बजेर पाँच मिनेटमा मोदीले एक ट्वीट गरेर उनले ८ बजे बेंगलुरुको इसरो सेन्टरमा वैज्ञानिकलाई भेट्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।
७ बजेर २० मिनेटमा उनी इसरो सेन्टर पुगे र इसरोका अध्यक्ष के सिवनले उनलाई स्वागत गरे ।
यो मौकामाअ इसरो सेन्टरको ‘मिशन अपरेशन कम्प्लेक्स’ मा मोदीले करिब २० मिनेट लामो भाषण दिए जसमा उनले वैज्ञानिकको जीवन र विज्ञानको महत्वबारे कुराकानी गरे ।
आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भनेका थिए, ‘भारतीय वैज्ञानिक ती व्यक्ति हुन् जो माता भारतीको जीतका लागि बाँच्छन् । मैले हिजो राती तपाईंहरुको मनस्थिती बुझ्न सकेको थिएँ । तपाईंको आँखाले धेरै कुरा बताइरहेको थियो । तपाईंहरुको अनुहारको उदासी मैले पढ्न सकिरहेको थिएँ । त्यसकारण हिजो राती म तपाईंहरुसँग धेरैबेर बसिनँ । तर मैले सोचेँ कि बिहान तपाईंहरुलाई पुनः एकपटक भेटेर कुराकानी गरौं ।’
चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। pic.twitter.com/mwTw8XaXtu
यतिबेला इसरो प्रमखु मोदीको नजिकै उचिएका थिए ।
भाषण पूरा भएपछि इसरो प्रमुखले मोदीलाई समूहका सबै वैज्ञानिकलाई भेट गराए र करिब सवा आठ बजे मोदी इसरो सेन्टरबाट बाहिरिए ।
दूरदर्शन न्यूजमा यो पूरा कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो जसमा ‘मिशन अपरेशन कम्प्लेक्स’ को गेटमा पुगेर मोदी फर्कन्छन् र के सिवनबारे सोध्छन् । तब भावुक के सिवनले उनलाई केही भन्छन् त्यसपछि मोदीले उनलाई अँगालो हाल्छन् ।
#india news#narendra modi#india#chandrayan
ट्रम्पदेखि ओबामासम्मः किन शोकमा डुब्यो अमेरिका ?
भारतमा गणतन्त्र दिवसको दिन चार स्थानमा बम बिस्फोट
अमेरिकाले वुहानबाट आफ्ना कुटनीनिज्ञ र नागरिक फिर्ता लाने, चार्टर विमानको व्यवस्था गरिँदै
घेरबन्दीमा राजपा : सरकार निल्नु न ओकल्नु !
लिभरपुल बराबरीमा रोकिँदा युनाइटेडको गोल बर्षा